waizviziva here kuti samsung yakavhura nharembozha yekutanga-ine simba?
Kuru Nhau & Ongororo Waizviziva here kuti Samsung yakavhura nharembozha yekutanga-ine simba?
Iko kune anopfuura zviuru chiuru mamodheru muSamsung & apos; s mbozhanhare mbozhanhare, kubva pamafoni ekutanga uye muhomwe-ane hushamwari mafoni mafoni kune epamusoro-e-iyo-iyo-giraidhi mafoni. Nharembozha isu & apos; dzatinoratidzira nhasi hadzina kungwara, asi isu tinofunga kuti kwavo kusarudzika kunoita kuti vakodzere nzvimbo pasi pezuva ... chaizvo chaizvo.
Muna 2009, Samsung yakaburitsa nyika & apos; yekutanga foni-inopihwa nhare mbozha. Yaizivikanwa seSamsung Guru E1107 uye yaitaridza sero rezuva rakavakirwa muplate yayo yekumashure. Kana ichionekwa nezuva, sero raigadzira magetsi iyo yaizowedzerazve bhatiri foni nemaapos. Sero diki rezuva raisakwanisa kupa simba rakawanda, zvakadaro. Kugadzira chaji inodikanwa yemaminetsi mashanu- kusvika-gumi-izwi kufona, foni yaifanira kutora awa & maapos anokodzera simba rezuva. Zvakadaro, iro rezuva rekuchaja chimiro zvine musoro zvakapihwa misika iyo foni yaive yakanangwa. Nharembozha yakagadzirirwa vatengi vanogara mumisika iri kusimukira nenzvimbo uko magetsi aigara achiitika.
Samsung Bhuruu Pasi Pasi Guru E1107 raive & apos; handiyo chete yezuva nhare mbozha yakagadzirwa naSamsung. Gare gare muna2009, kambani yakaburitsa iyo Samsung Blue Earth, iyo zvakare yaive neseru rezuva kumusana kwayo - awa yezuva rakashandurwa kuita maminetsi gumi ekuwedzera enguva yekutaura. Kusiyana neGuru, iyo Samsung Bhuruu Pasi yakapa mashoma maficha epamberi, senge kuwana kune webhu, YouTube, uye masocial network. Inogona kubatana neinternet pamusoro peWi-Fi kana 3G, nepo GPS redhiyo ichigonesa masevhisi enzvimbo. Yakatengeswa seyakagadzirwa eco-hushamwari, iyo foni yakavakwa nezvinhu zvakadzokororwa uye ikauya mune yakashandiswazve kadhibhodhi bhokisi iro rakapetwa kaviri sechigadziko.
Ko Samsung inofanira kupa simba rezuva kumwe kuyedza mune yayo inotevera batch yemafoni efoni, kana vanhu vachifanira kuenda kune vakazvitsaurira mundiro wezuva pachinzvimbo? Regai tizive mune zvakataurwa!
mareferensi: Samsung , Inhabitat
Samsung rezuva nhare mbozha
tamba zvimwe vs ita zvakawanda verizon
ipad pro wifi vs nhare
Apple iPhone inorova rekodhi chikamu chemusika cheUS sezvo mureza wekuda unowedzera
iPhone 12 ndiyo yepasi rose mafoni & apos anotengesa zvakanyanya parizvino muna 2021 uye Galaxy S21 haina kana pedyo
Vakanakisa mutambo vatongi ve iPhone uye Android
Tora nyowani nyowani iPhone 8 ye $ 500 uye $ 600 iPhone 8 Plus kubva kuCostco
Maitiro ekuisa Git paMac uye Gadzira SSH Keys
Newfangled Verizon 5G kufukidzwa paJersey Shore kunowana bvunzo yekukurumidza uye kukunda ... pamhenderekedzo
Iyo Motorola One 5G Ace inodhura zvakanyanya kubva pabhat kuAT & T Prepaid